देउवाले गर्न लागेको पदाधिकारी नियुक्तिमा... :: भानुभक्त :: Setopati
देउवाले गर्न लागेको पदाधिकारी नियुक्तिमा पौडेलको आपत्ति (भिडियो)
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौँ, वैशाख १६
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएपछि नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्।
चुनावी समीक्षा गर्न बसेको कांग्रेस बैठक आइतबार सकिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पौडेलले देउवाको कदमको विरोध गरेका हुन्।
बैठकको अन्त्यमा सभापति देउवाले रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सोमबार नै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए।
महाधिवेशन भएको २ महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्ने पार्टी विधानको व्यवस्था उल्लेख गर्दै पौडेलले अब ती पद नै नरहेको जिकिर गरे।
'विधानमा महाधिवेशनको २ महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने छ। नगरेपछि ती पदहरु स्वत रिक्त भए,' उनले भने, 'अहिले फेरि उहाँले कुन पदमा नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ?'
विधानलाई व्यवस्थित नगरL गर्न लागेको नियुक्ति आपत्तिजनक रहेको पौडेलले बताए।
'पार्टीभित्र सहमति गरेर विधानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, यो धारालाई कुन रूपमा राख्ने हो भन्ने कुराको अन्डरस्टान्डिङ नबनाइकन पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ,' उनले भने।
विधानले पार्टी सभापतिले मनोनयन गरेर निर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महाधिवेशन सकिएको २ महिनाभित्रै यी पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने पनि विधानमा उल्लेख छ।
दुई वर्ष वितिसक्दा पनि देउवाले नियुक्ति गर्न सकेका थिएनन्। केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षकै बहुमत छ।
यदि बहुमतबाट सभापतिले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो भने के गर्नु हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, 'के गर्नु अब हामी त्यसको विरोध गर्छौँ र यो इश्यु उठाइराख्छौँ।'
उनले सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदा देउवा पक्षसँगको सहमतिमै पदाधिकारी नियुक्ति भएको समेर स्मरण गरे।
'पार्टीमा एउटै कुरा छ विधानको परिधिभित्र रहेर सहमतिले निर्णय गर्ने कांग्रेसको परम्परा हो। यसअघि पनि त्यहि भएको हो। हाम्रो स्पिरिट त्यही हो,' उनले भने।
सहमतिमै पार्टीलाई अघि बढाउन आफूले केन्द्रीय समितिमा विरोध नजनाएको पनि उनले बताए।
'यो चुनौतीपूर्ण घडीमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी लिने र कांग्रेसलाई सच्याएर जाने धारणा अनुसार बैठकमा विरोध र बहिष्कार अबलम्बन गरेनौं, तर उहाँले पदाधिकारी नियुक्ति भोलि हुन्छ भनेर अर्को बैठक डाक्नु भो त्यसमा हामीले विरोध गरेका छौँ,' उनले भने।
देउवाले गएको चुनावमा भएको कांग्रेस हारको जिम्मा नलिएको भन्दै आलोचना समेत गरे।
'उहाँले जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई थोपरेर बहुमतबाट निर्णय गराउनुभएकोमा आपत्ति छ। साथीहरूलाई निराशा होला भनेर नोटअफ डिसेन्ट लेखेनौँ ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख १६, २०७५, २१:१३:२३